एक फ्यानले भने तपाईंलाई पाइन भने सुसाइड गर्छु– गायिका साहिमा | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-07-17T19:26:29.818592+05:45
(Tuesday, 17 July, 2018)
एक फ्यानले भने तपाईंलाई पाइन भने सुसाइड गर्छु– गायिका साहिमा
साहिमा श्रेष्ठ, हाल चर्चामा रहेकी गायिका हुन् । चलचित्रको पाश्रव गायनदेखि एल्बमको गीतहरुमा समेत उनी छाउँने गरेकी छन् । ‘तिम्रो डोला डोला हातमा’, ‘तिमी बोल मीठा मीठा कुरा’, ‘तिम्रो पिक्चर हिट’ लगायत उनले स्वर दिएको चलचित्रका थुप्रै गीत हिट भएका छन् । पहिलो एल्बम ‘साहिमा’को ‘हेरेको हे¥यै म हुन्छु होला’ बोलको गीतबाट दर्शक श्रोताको मनमा बस्न सफल उनी पछिल्लो समय स्टेज कार्यक्रममा समेत व्यस्त रहेकी छन् । नारीहरुको महान चाड हरितालिका तीजलाई लक्षित गरेर अहिले उनले ‘आमाले पकाको दर खाने हो’ र ‘ओ भोला शङ्कर’ गीत ल्याएकी छन् । तीजमा आमा, दिदी, बैनीलाई छमछमी नचाउन आफूले तीज गीत बनाएको उनले बताइन् । मेकअप हल्का मन पराउने उनी गाजल, आइस्याडो, लिपस्टिक कहिल्यै छुटाउँदिन । यी नै गायिका साहिमालाई रातोपाटीको दस प्रश्न ।
– भर्खर मैले दुईवटा तीज गीत ‘ओ भोला शङ्कर’ र ‘आमाले पकाको दर’ बाहिर ल्याएकी छु । यसकै भिडियो प्रमोसनदेखि गीतको प्रमोसमा व्यस्त रहेकी छु ।
तपार्इं स्टेज कार्यक्रमा धेरै देखिने गायिका, सौन्दर्यमा कतिको ध्यान दिने गर्नुभएको छ ?
– हल्काफुल्का ध्यान दिन्छु । मेकअप आफै गर्छु । समय मिल्यो भने कहिले काहीँ पार्लर पनि जाने गरेकी छु । मेकअपमा खासै समय लाग्दैन मलाई । मेकअपमा गाजल, आइस्याडो, लिपस्टिक कहिल्यै छुटाउँदिन ।
– रुचि छ नि । फेसन गर्न पनि मनपर्छ । बजारमा के फेसन चलेको छ । के आउँदैछ । सबैको जानकारी लिने गरेकी छु । नर्मल फेसनमा हिँड्न रुचाउने केटी म । सारी र ब्लाउज लगाउँदा मलाई धेरै सुहाउँछ । अरुले मलाई राम्रो देख्ने पहिरन पनि यही हो ।
दैनिक कति समय रियाजमा बित्छ ?
– फुर्सद भएको समय दिनको तीन घन्टासम्म पनि रियाज गर्ने गरेकी छु । व्यस्त हँुदा एक घन्टा अनिवार्य गर्छु ।
– धेरै मनपर्ने ठाउँ पोखरा हो । पोखराको सौन्दर्यले मेरो मन लोभ्याएको छ । जान मन लागेको ठाउँ फोक्सुन्डो ताल हो । यसको बारेमा धेरै सुनेकी छु । एक पटक पुग्ने इच्छा छ ।
गायनको पहिलो कमाइ केमा खर्च भयो ?
– पहिलो कमाइ जति थियो, त्यो सबै भगवानलाई नै चढाइ दिएँ ।
आफ्नो शरीरको मनपर्ने अङ्ग ?
– मलाई मेरो आँखा धेरै मनपर्छ । मलाई मात्र हो र ? अरुले पनि आँखा नै मन पराउँछन् । तिम्रो आँखा राम्रो छ भन्ने कति छन् कति ।
प्रेममा हुनुहन्छ ?
छैन । प्रेम प्रस्ताव त धेरै आउने गरेका छन् । माया गर्छु भनेर पछि लाग्ने पनि धेरै छन् । एउटा फ्यानले धेरै फोन गर्थे । उनको फोनले म दिक्दार भएकी थिएँ । उनी मलाई मन पराउँदा रहेछन् । फोनमा उनले मलाई पाइन भने सुसाइड गर्छु भनेर धम्क्याए । मैले तपाईंलार्इं देखेको पनि छैन । चिनेको पनि छैन । मर्न चहानु हुन्छ भने म बचाउन पनि सक्दिनँ । त्यतिकै म कसरी तपाईंकी हुनसक्छु । मलाई लाइफमा धेरै अगाडि बढ्नु छ । मायाको कुरा अहिले सोच्न सक्दिनँ । पहिले करियर बनाउन पछि यस विषयमा सोचौँला भनेर उनलाई सम्झाएँ ।
ड्रिम ब्वाइको कल्पना पनि गरेको होला नि ?
– मलाई धेरै माया गर्ने, मेरो पेसालाई सम्मान गर्ने, काममा सपोट गर्ने होस् ।
रोजेको व्याक्तिसँग डेट जाने अफर दियो भने ?
– बलिउड अभिनेता अक्षय कुरमासँग जान्छु । उहाँ मलाई धेरै मनपर्छ ।
होला त कशिसको सपना पूरा ?
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले आयुष्मानसँग लगनगाँठो कस्दै, भयो इन्गेजमेन्ट
‘झमक बहादुर’को ट्रेलरः सुन तस्करी र लुटपाटको कथा
नेसनल कलेजले मनायो “ओपन डे”, कलेजका सबै गतिविधि एकदनिका लागि खुल्ला
बुधबारबाट राप्रपाको जनजागरण अभियान सुरु हुने
आईक्यानको ‘वेस्ट प्रिजेन्टेड एनुयल रिपोर्ट अवार्ड २०१७’ बोटलर्स नेपाल लिमिटेडलाई
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडकोे मिस्ड कल बैंकिङ्ग सेवा सुरु
तायाहाङको ‘तिमी मेरो सामु आउँदा’
मेगा बैंकको १००औं शाखा सिन्धुपाल्चोकको थाङपालमा
गण्डकी विकास बैंकको थप ६ नयाँ शाखा सञ्चालनमा
सामसङ प्लाजाद्धारा निर्मल विद्यापथ र अजाद स्कुललाई सहयोग